Maalmahan, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ma aha oo kaliya Console ciyaarta noo ah, waxa ay sidoo kale ciyaaryahan weyn warbaahinta ee ku caashaqay movie. Dadka isticmaala Windows, ay si fudud u sii qulquli karaan video ka PC in Madaxweyne Siilaanyo oo isticmaalaya "Play To" function. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan hawl fudud in ay sii qulquli video ka Mac in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, sida ay dhab ahaan loogu talagalay in ay si fiican u shaqeeyaan midba midka kale. Laakiin taas micnaheedu ma ahan video aadan qulquli karaan Mac. Halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa habab dhowr ah si aad u samaysay shaqada. Waxa kale oo aad eegi kartaa boggan si aad u hesho xal ka badan.
Habka 1: Isticmaal SofaPlay
Habka 2: Isticmaal Plex Media Server
SofaPlay waa app sahlan in la isticmaalo oo u suurta galinaya in aad sii qulquli video ka Mac in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. Raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida ay u shaqayso. Ka hor inta tallaabo, fadlan hubi in aad Mac iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah waa in shabakad isku mid ah.
Tallaabo 1: Ku rakib app this
Marka hore waa in aad kala soo bixi iyo rakibi SofaPlay ka App Mac ka Store.
Talaabada 2: Isku app in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Hubi in aad haysatid Madaxweyne Siilaanyo Oo Video app aad Console Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. Sidoo kale iska hubi in geeyo waa karti goobaha on your Madaxweyne Siilaanyo. Tag Settings> rabtid> "ogolow Play To Streaming" oo aad iska baarto.
Markaas fur SofaPlay aad Mac iyo dooro ikhtiyaarka Madaxweyne Siilaanyo-SystemOS ee ka mid ah liiska.
Talaabada 3: Laga bilaabo hoorto
Jiid file video ah oo wuxuu galay SofaPlay oo muddo ka dib waxaa bilaaban ciyaaraha ku saabsan Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Plex muddo dheer go-u xal ah u isticmaala kuwaas oo doonaya inay sii qulquli video qalabka kale. Hadda waxa hore u taageeray Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. Sidaas daraadeed waxaad u isticmaali kartaa si qulquli videos ka Mac in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Talaabada 1: Calan Plex
Download Plex ka ay si rasmi ah. Markaasaa waxaa u nuqul ka si aad Codsiyada folder.
Burcad Plex aad Mac. Markaas waxaa lagu weydiin doonaa in aad login la account Plex ah. Waad ka boodi kartaa tallaabadan ay doorashada "Ma doonayo xisaab?".
Markaas waxaad u baahan tahay in ay akhriyaan oo ay aqbalaan Heshiiska End User ah. Ka dib markii in, Plex bilaabi doonaan samaynta. Markaasaa waxaa u weydiin doona in aad saxiixdo mar kale, kaliya iska indha fariin this.
Raac saaxir ah Mudanayaasha ka, dhuftay "Next" oo kaliya ka tago fursadaha caadiga ah. Markaas dabadeed "Add Section" bogga aad tegi doonaa. Dooro "Movies" dooro folder meesha filimada aad ku kaydsan yihiin, ka dibna riix "Save".
Plex markaa ka codsan doonaan haddii aad rabto in lagu daro channel ama aan. Haddii aadan jeclaan this, ka gudub taas oo guji "qabtay" dhammayn Mudanayaasha.
Tallaabo 2: Ku bilow hoorto
Iyada oo update ka socday in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah (Oct 2014), aad haatan isticmaali kartaa app cusub oo lagu magacaabo Media Player in aad Plex Media Server shaqeeyaan dhammaataan iyo qulquli oo dhan video ah oo aad qotomisay waxaa la. Si saas yeela,
Apps Open iyo Games ka Start shaashadda. Markaas ka menu Apps ah, Media furan Player.
Dhowr ilbiriqsi ka dib, aad Plex Media Server tusi doonaa. Dooranaysaa aad server oo heli video aad u doonayaa inaan u ciyaaro. Waa in hadda la hoorto aad video ka Mac si aad Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
CleanMyMac - ugu caansan Tool in nadiifi Your Mac
> Resource > Mac > Sida loo sii qulquli Video ka Mac in TV isticmaalaya Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah